Nahoana ny ekipa marketing sy IT no tokony hizara andraikitry ny cybersecurity | Martech Zone
Ny areti-mifindra dia nanamafy ny filan'ny departemanta tsirairay ao anatin'ny fikambanana iray mba handinika bebe kokoa ny cybersecurity. Misy dikany izany, sa tsy izany? Arakaraky ny ampiasantsika ny teknolojia amin'ny fizotrantsika sy ny asantsika isan'andro, no mety ho mora tohina amin'ny fandikan-dalàna. Saingy ny fampiharana ny fomba fanao amin'ny cybersecurity tsara kokoa dia tokony hanomboka amin'ny ekipan'ny varotra mahay.
Ny cybersecurity dia mampanahy ny teknolojian'ny informatika (IT) mpitarika, Lehiben'ny Fiarovana ny Fampahalalam-baovao (CISO) sy ny Lehiben'ny Teknolojia (CTO) na Lehiben'ny Fampahalalam-baovao (CIO). Ny firongatry ny heloka bevava an-tserasera dia - noho ny filana - nampisondrotra ny fiarovana an-tserasera mihoatra ny an'ny resaka IT fotsiny. Farany, Ny mpanatanteraka sy ny birao C-suite dia tsy mahita ny risika amin'ny cyber ho 'olana IT' intsony fa toy ny fandrahonana mila vahana amin'ny ambaratonga rehetra. Mba hiadiana tanteraka amin'ny fahavoazana mety hitranga amin'ny cyberattack mahomby dia mitaky ny orinasa hampiditra ny cybersecurity amin'ny paikadin'izy ireo amin'ny fitantanana ny risika.
Mba hahazoana fiarovana feno, ny orinasa dia tsy maintsy mandanjalanja eo amin'ny fiarovana, ny fiainana manokana ary ny traikefan'ny mpanjifa. Ahoana anefa no ahafahan'ny fikambanana mahazo an'io fifandanjana sarotra io? Amin'ny famporisihana ny ekipan'ny varotra azy ireo handray anjara mavitrika kokoa.
Nahoana ny mpivarotra no tokony hikarakara ny cybersecurity?
Ny anaranao marika dia tsara amin'ny lazanao ihany.
Mitaky 20 taona ny fananganana laza ary dimy minitra ny fanimbana azy.
Ka inona no mitranga rehefa mahazo ny vaovao sy ny fidirana ilainy ireo mpanao heloka bevava amin'ny Internet mba hisolo tena orinasa mahomby, hamitahana ny mpanjifany, hangalatra angon-drakitra, na ratsy kokoa? Olana lehibe ho an'ny orinasa.
Eritrereto izany. Efa ho 100% amin'ny orinasa no mandefa mailaka ara-barotra isam-bolana amin'ny mpanjifany. Ny dolara ara-barotra rehetra lany dia mahita fiverenana amin'ny fampiasam-bola (ROI) eo amin'ny $36 eo ho eo. Ny fanafihana phishing manimba ny marika iray dia manohintohina ny fahombiazan'ny fantsom-barotra.
Indrisy fa mora loatra ho an'ny mpisoloky sy ny mpilalao ratsy ny mody olon-kafa. Efa matotra sy misy ny teknolojia misoroka an'io fanodinkodinana io, saingy tsy ampy ny fananganana satria sarotra ho an'ny fikambanana IT indraindray ny mampiseho ny orinasa mazava. ROI ho an'ny fepetra fiarovana manerana ny fikambanana. Satria miharihary kokoa ny tombotsoan'ny fenitra toa ny BIMI sy DMARC, ny marketing sy ny IT dia afaka mandoko tantara iraisana. Fotoana izao ho an'ny fomba fiasa feno kokoa amin'ny cybersecurity, izay manimba ny silo ary mampitombo ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampana.
Fantatry ny IT fa tena zava-dehibe ny DMARC amin'ny fiarovana ny fikambanana amin'ny phishing sy ny loza ateraky ny laza, fa miady mafy kosa izy mba hahazoana tombony amin'ny fampiharana azy avy amin'ny mpitarika. Tondro marika ho an'ny famantarana ny hafatra (BIMI) dia tonga, miteraka fientanentanana ao amin'ny departemantan'ny varotra, izay maniry izany satria manatsara ny tahan'ny misokatra. Ny orinasa dia mampihatra DMARC sy BIMI ary voilà! Ny IT dia mahazo fandresena mivaingana sy mivaingana ary Ny marketing dia mahazo tombom-barotra azo tsapain-tanana amin'ny ROI. Mandresy ny rehetra.
Ny fiaraha-miasa no zava-dehibe
Ny ankamaroan'ny mpiasa dia mijery ny IT, ny varotra ary ny departemanta hafa amin'ny silos. Saingy rehefa lasa be pitsiny sy be pitsiny ny fanafihana an-tserasera, dia tsy misy mahasoa na iza na iza io fizotry ny fisainana io. Ny mpivarotra koa dia tsy maintsy manampy amin'ny fiarovana ny angon-drakitra momba ny fandaminana sy ny mpanjifa. Satria mifandray akaiky kokoa amin'ny fantsona toy ny media sosialy, doka ary mailaka izy ireo, dia mampiasa sy mizara fampahalalana be dia be ny mpivarotra.
Mampiasa izany ho tombontsoany ireo mpanao heloka bevava an-tserasera izay manomboka fanafihana ara-teknika ara-tsosialy. Mampiasa mailaka izy ireo handefa fangatahana na fangatahana sandoka. Rehefa misokatra, ireo mailaka ireo dia mamindra ny solosain'ny mpivarotra amin'ny malware. Ekipa marketing maro ihany koa no miara-miasa amin'ireo mpivarotra ivelany sy sehatra samihafa mitaky fidirana na fifanakalozana vaovao momba ny raharaham-barotra.
Ary rehefa antenaina hampiseho ny fitomboan'ny ROI ny ekipan'ny varotra nefa manao bebe kokoa amin'ny kely kokoa, dia mitady teknolojia vaovao sy manavao izay mampitombo ny vokatra sy ny fahombiazana. Saingy ireo fandrosoana ireo dia afaka mamorona fisokafana tsy voahevitra ho an'ny cyberattacks. Izany no antony tsy maintsy miala amin'ny silony ny mpivarotra sy ny matihanina IT mba hiara-hiasa sy hiantoka ny fanatsarana ny varotra dia tsy mamela ny orinasa ho mora voan'ny risika amin'ny fiarovana. Ny CMO sy ny CISO dia tokony hanara-maso ny vahaolana alohan'ny fampiharana azy ary manofana mpiasan'ny varotra hamantatra sy hitatitra ireo loza mety hitranga amin'ny fiarovana an-tserasera.
Ny matihanina amin'ny IT dia tokony hanome hery ny matihanina amin'ny varotra ho lasa mpitantana ny fomba fanao tsara indrindra momba ny fiarovana ny vaovao amin'ny fampiasana:
Fanamarinana maromaro (MFA)
Ny mpitantana ny tenimiafina toy izany Dashlane or LassPass.
Fidirana tokana (SSO)
Fitaovana sarobidy iray hafa hampidirina ao amin'ny paikady fiarovana an-tserasera? DMARC.
Ny sandan'ny DMARC ho an'ny ekipa marketing
Ny Authentication, Reporting and Conformance amin'ny Hafatra mifototra amin'ny sehatra no fenitra volamena amin'ny fanamarinana mailaka. Ny orinasa mampiasa DMARC amin'ny Enforcement dia miantoka fa ny orinasa nankatoavina ihany no afaka mandefa mailaka amin'ny anaran'izy ireo.
Amin'ny fampiasana ny DMARC (sy ny protocols SPF sy DKIM) amin'ny fomba mahomby ary mankany amin'ny Enforcement, ny marika dia mahita fanatsarana ny fandefasana mailaka. DMARC ao amin'ny Enforcement dia manakana ny hackers tsy hahazo fiara maimaim-poana amin'ny sehatra voaaro.
Na SPF na DKIM dia tsy manamarina ny mpandefa amin'ny saha "Avy amin'ny:" hitan'ny mpampiasa. Ny politika voatondro ao amin'ny rakitra DMARC dia afaka miantoka fa misy ny “fanitsiana” (izany hoe ny fifanandrinana) eo amin'ny adiresy Avy amin'ny: sy ny sahan'ny fanalahidin'ny DKIM na ny mpandefa voamarina SPF. Ity paikady ity dia manakana ireo mpanao heloka bevava amin'ny aterineto tsy hampiasa sehatra sandoka ao amin'ny From: saha izay mamitaka ny mpandray ary mamela ireo mpijirika hamerenana ireo mpampiasa tsy voahevitra amin'ny sehatra tsy misy ifandraisany eo ambany fifehezany.
Ny ekipan'ny marketing dia mandefa mailaka fa tsy mikendry mpanjifa mety. Amin'ny farany, tian'izy ireo hosokafana sy horaisina ireo mailaka ireo. Ny fanamarinana DMARC dia manome antoka fa tonga ao amin'ny boaty fidirana ireo mailaka ireo. Ny marika dia afaka manamafy ny faharetany bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana marika marika ho an'ny famantarana ny hafatra (BIMI).
Ny BIMI dia mamadika ny DMARC ho ROI ara-barotra azo tsapain-tanana
BIMI dia fitaovana tokony hampiasain'ny mpivarotra rehetra. Ny BIMI dia mamela ny mpivarotra hampiditra ny mari-pamantarana ny marika amin'ny mailaka voaaro, izay hita fa mampitombo ny tahan'ny misokatra 10% amin'ny antsalany.
Raha fintinina, ny BIMI dia tombony marika ho an'ny mpivarotra. Izy io dia miorina amin'ny teknolojia fanamarinana mailaka matanjaka - DMARC amin'ny fampiharana - ary fiaraha-miasa eo amin'ireo mpandray anjara samihafa ao anatin'izany ny marketing, IT ary ny sampan-draharaha ara-dalàna.
Ny mpivarotra dia niantehitra foana tamin'ny andalana lohahevitra marani-tsaina sy manintona mba hisarihana ny sain'ny mpandray, fa miaraka amin'ny BIMI, ny mailaka mampiasa logo dia lasa haingana sy mora fantatra. Na dia tsy manokatra ny mailaka aza ny mpanjifa dia mahita ny logo izy ireo. Toy ny fametrahana logo amin'ny t-shirt, tranobe, na swag hafa, ny logo amin'ny mailaka dia miantso avy hatrany ny sain'ny mpandray ho amin'ilay marika — fivoarana tsy nisy hatrizay hatrizay raha tsy manokatra ny hafatra aloha. BIMI dia manampy ny mpivarotra hiditra ao amin'ny boaty fidirana haingana kokoa.
Ny DMARC an'i Valimail ho serivisy
DMARC fampiharana is ny lalana mankany BIMI. Ny fandehanana an'io lalana io dia mila miantoka ny DNS manamarina tsara ny mailaka nalefa rehetra - hetsika mandany fotoana ho an'ny orinasa. Ny 15% amin'ny orinasa ihany no nahavita ny tetikasa DMARC. Tsy maintsy misy fomba tsara kokoa, sa tsy izany? Misy!
Valimail Authenticate dia manolotra DMARC ho serivisy, ao anatin'izany:
Fanamafisana DNS mandeha ho azy
Famantarana mpandefa manan-tsaina
Lisitry ny asa mora arahina izay manampy ny mpampiasa hahatratra ny fampiharana DMARC haingana sy mitohy
DMARC Authentication™ manala ny risika amin'ny fanomezana DNS. Ny fahitana azy feno dia ahafahan'ny orinasa mahita hoe iza no mandefa mailaka amin'ny anaran'izy ireo. Ny workflow voatarika sy mandeha ho azy dia mandeha amin'ny mpampiasa amin'ny asa tsirairay mba hamolavola tolotra tsy mila fahalalana lalina sy ara-teknika na amin'ny fifanekena amin'ny fahaizana ivelany. Farany, manampy amin'ny fanamarinana ny tolo-kevitra mandeha ho azy ny famakafakana contextual — ary ny fampandrenesana dia mitazona ny mpampiasa ny vaovao farany.
Tsy afaka miaina ao anaty silo ny sampan-draharaha momba ny varotra, mialokaloka amin'ny olana momba ny cybersecurity, intsony. Satria mora idirana kokoa izy ireo noho ny fisiana lehibe kokoa ao amin'ny Twitter, LinkedIn ary ireo sehatra media sosialy hafa, ireo hackers dia mahita azy ireo ho tanjona mora sy azo trandrahana. Satria fantatry ny fikambanana ny lanjan'ny famoronana kolontsain'ny fahatsiarovan-tena amin'ny cyber, dia tsy maintsy manasa ny ekipan'ny varotra izy ireo mba hiara-hiasa eo amin'ny latabatra fitantanana risika miaraka amin'ny ekipa IT sy CISO.
Andramo ny Valimail
Disclosure: Martech Zone dia nampiditra rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: BIMIfanodinkodinana marikacisectocyberattacksfisolokiana ao amin'ny InternetcybersecurityDMARCfanamarinana mailakamailaka Marketinglazan'ny mailakafitantanana laza malaza amin'ny mailakafanamarinana anton-javatra marobephishinglazaspoofing
Mpandraharaha sy mpanatanteraka manerantany, Alexander dia Tale Jeneralin'ny orinasa roa teo aloha ary nitantana ekipa varotra manerantany ho an'ny orinasa telo izay nanao IPO. Nitana toerana mpandalina sy mpanatanteraka tao amin'ny orinasam-pikarohana lehibe toa ny The Boston Consulting Group sy Forrester Research izy miaraka amin'ireo fanombohana Silicon Valley toa ny ValiCert, Sygate, ary SyncTV.
Ahoana ny fomba hanampiana ny fanapahan-kevitry ny Entity amin'ny fizotran'ny varotrao